US for voluntary return of Rohingyas – CRM
ကုလလူ့အခွင့်အရေးမဟာမင်းကြီး လိုရာဆွဲချဲ့ကားပြောသည်ဟု မြန်မာတုံ့ပြန်
Posted on July 7, 2018 Author swelsone
ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး၏ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးပြောဆိုချက်များမှာ လိုရာဆွဲချဲ့ကားပြောဆိုမှုများ ပါဝင်နေသည်ဟု မြန်မာကိုယ်စားလှယ်က လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီအစည်းအဝေးတွင် တုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်သည်။ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ၏ ပုံမှန်အစည်းအဝေး၌ ဇူလိုင်လ ၄ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးကျော်မိုးထွန်းက ယင်းသို့ တုံ့ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီး Zeid Ra’ad al-Hussein ၏ Conference Room Paper တွင် ပါဝင်သော အချက်အလက်အများအပြားမှာ မှန်ကန်မှုမရှိဘဲ လိုရာဆွဲဖော်ပြခြင်း သို့မဟုတ် ချဲ့ကားဖော်ပြမှုများ ပါဝင်ကြောင်း ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ပြောဆိုသည်။ မှားယွင်းသည့် အချက်အလက်များသည် ဖတ်ရှုသူများ၊ အထူးသဖြင့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှား ချမှတ်စေနိုင်ကြောင်း၊ ရခိုင်ဒေသအတွက် ရေရှည်တည် တံ့မည့်အဖြေကို ရှာဖွေရန် မြန်မာအစိုးရကြိုးစားအားထုတ်မှုများအပေါ် ဆိုးရွားစွာ သက်ရောက်စေကြောင်း ဦးကျော်မိုးထွန်းက ဆိုသည်။ မဟာမင်းကြီး၏စာတမ်းတွင် ဟိန္ဒူ ဘာသာဝင် […]
Posted on July 12, 2018 Author swelsone
This article is brought to you in association with the United Nations. “Small children butchered in front of their parents. Girls and women gang-raped while family members were tortured and killed,” United Nations Secretary-General António Guterres said Tuesday inaWashington Post opinion piece, adding: “Nothing could have prepared me for the bone-chilling accounts.” The continuing plight of nearly one […]